War Cusub oo kasoo kordhay Dil argagax leh oo Nairobi loogu geestay Gabar Soomaaliyeed | Salaan Media
War Cusub oo kasoo kordhay Dil argagax leh oo Nairobi loogu geestay Gabar Soomaaliyeed
Ciidamada booliiska dalka Kenya ayaa xabsiga dhigay afar haween ah oo loo heesto in ay ku lug lahaayeen dil maalmo kahor xaafada Islii ee magaalada Nairobi loogu geestay gabar 14-jir Soomaali ah.
Xaafada Islii ayaa maalmo kahor laga helay meydka Ismahaan C/salaam oo 14-sano jir aheyd , waxaana meydka gabadhan ka muuqday jir dil xoogan oo lagu sameeyay iyo sidoo kale jirkeeda oo lagu shubay aashito.
Booliiska Kenya ayaa kiiska dilkan u xiray afar haween ah ay ku jirto gabadha la dilay eedadeed oo lagu magacaabo Nadiifo Maxamed, Eedada gabadha ayaana la sheegay in falka dilka ah iyadu maleegtay.
Wargeyska The Star ee kasoo baxa Dalka Kenya ayaa qoray in Ismahan inta aan la dilin kahor loo geestay fal kufsi ah, waxaa sidoo kale Wargeska qoray in gabadha jirkeeda lagu shubay aashito daran.
Gabadha sida xun loo jirdilay oo aheyd arday wax ka dhigata iskuul kuyaala magaalada Nairobi ayaa la nooleyd eedada la tuhmayo in dilkeeda maleegtay, waxaana wali si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay dilkan argagaxa lahaa.
Booliiska Nairobi ayaa hada bilaabay baaritaano ku aadan falkan dilka ah ee loo geestay gabadhan Soomaaliyeed, waxaana Meydka gabadha la dilay lagu sameeyay baaritaano lagu ogaanayo cidii ka dambeesay.